Hordhac: Juventus v Milan – Labo Ka Mid Ah Kooxaha Ugu Waa Weyn Italy Oo Geesaha Isgelinaya Iyadoo 21 Dhibcood Ay U Dhaxeyso. - jornalizem
Hordhac: Juventus v Milan – Labo Ka Mid Ah Kooxaha Ugu Waa Weyn Italy Oo Geesaha Isgelinaya Iyadoo 21 Dhibcood Ay U Dhaxeyso.
Juventus ayaa laga yaabaa inay hogaanka horyaalka Serie A ka dhigato 10 dhibcood ugu yaraan hal maalin marka ay maanta Turin ku soo dhaweynayaan kooxda AC Milan.
Kooxda horyaalka difaacaneysa ayaa wadada u saaran inay markii afaraad oo isku xigta hanato Scudetto, waxaana ay noqdaan kuwa xoogan isbuucyadii ugu danbeysay iyagoo qaab ciyaareed fiican ku jira taasoo keentay inay ka fogaadaan ugu kooxda ku soo xigta ee Roma.
Afar barbaro oo isku xigta oo ay gashay Roma ayaa ka dhigtay in Juventus ay sii fogaato iyagoo haatan hogaanka kaga haya todoba dhibcood.
Juve ayaase barbaro la gashay kulankii ugu danbeeyay kooxda Udinese, waana markii lixaad oo kooxda Allegri ay ku guuldareysatay inay dhibcaha buuxda hesho xilli ciyaareedkan, iyadoo guularadoodii ugu danbeysay ay aheyd 12 kulan ka hor.
Waxa ay shabaqa ilaashadeen afar kulan oo isku xigta tartamada oo dhan, waxaana xilli ciyaareedka oo dhan laga dhaliyay sagaal gool, iyagoo rikoorka daafaca ugu fiican Yurub la haya kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Rikoorkooda ay shabaqa ku ilaashadeen 13 kulan ayaase ah kan ugu fiican shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Garoonkooda ayay sidoo kale rikoor fiican ku heystaan iyadoo aan horyaalka looga badinin islamarkaana ay kaliya afar dhibcood ku hor dhumiyeen jamaahiirtooda xilli ciyaareedka oo dhan.
Allegri ayaan isbedel badan ku sameyn doonin kooxdiisa inkastoo laga yaabo inuu dib khadka dhexe ugu soo yeero Claudio Marchisio halka Arturo Vidal uu kooxda ku soo laabtay ka dib dhaawac uu ku maqnaa. Laakiin Martin Cerares iyo Allegri iyo Alessandro Marti oo dhawaan kooxda dib ugu soo laabtay ayaa seegaya kulankaan.
Carlos Tevez ayaa xumad ay heysaa waxaana ku jira shaki inuu ciyaari karo inkastoo tababare Allegri uu ku soo darsaday kooxda uu u soo xushay inuu kala hortago Milan.
Milan ayaa kulankaan u safreysa kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan iyagoo 21 dhibcood oo buuxda ka danbeeya islamarkaana ku jira kaalinta 8aad, 10 dhibcood ayay u jiraan booska ugu danbeeya ee loogu soo baxayo Champions League, 11 dhibcood ayayna u jiraan booska ugu soo horeeya ee looga haro Serie A.
Si kastaba, waxa ay soo gabagabeeyeen shan kulan oo guul la’aan ah horyaalka iyagoo 3-1 ku garaacay kooxda hoose ee Parma.
Guushaas ayayse ku gaareen San Siro, si kastaba dhibaatadooda waxa ay taalaa marka ay gurigooda ka soo maqan yihiin. Rossoneri ayaa ku guuldareysatay inay badiso lixdii kulan ee ugu danbeysay ee ay martida ahaayeen, iyagoo badiyay kaliya labo kulan oo ay marti ahaayeen xilli ciyaareedka oo dhan.
Waxaa intaas sii dheer waxa ay guuldarooyinkii ugu badnaa (37) iyo goolashii ugu badnaa ee laga dhaliyay (124) ay ka soo gaareen Juventus horyaalka Serie A marka loo fiiriyo koox kale.
Tababaraha Rossoneri Filippo Inzaghi oo isaga hargab uu ku dhacay ayaa la tacaalaya dhaawacyada Riccardo Montolivo iyo Nigel de Jong, isagoo khadka dhexe ka ciyaarsiin doona sidexda ciyaaryahan ee Andrea Poli, Sulley Muntari iyo Michael Essien.
Dhanka daafaca saxiixyada cusub Gabriel Paletta iyo Luca Antonelli ayaa la filayaa inay kulankoodii ugu horeysay ciyaaraan halka Alessio Cerci uu u dagaalamayo booskiisa.